Media Mission Nepal इलामबाट १६ औं सत्याग्रह शुरु गरे डा. केसीले - Media Mission Nepal
इलामबाट १६ औं सत्याग्रह शुरु गरे डा. केसीले
Published On :9January, 2019 11:23 pm
चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि सत्याग्रह शुरु गरेका डा गोबिन्द केसीले इलामको फुलगाछिमा १६औँ आमरण अनसन शुरु गर्दै । चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा आफूसँग भएको सझौता अनुसार संसदको समितिले पास नगरेको भन्दै विभिन्न माग राखेर अनसन शुरु गरेको हो । तस्वीर: गंगा पराजुली, पशुपतिनगर
पशुपतिनगर, २५ पुस : चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग गर्दै डा गोविन्द केसीले इलाममा १६ औँ सत्याग्रहको शुरुआत गर्नुभएको छ ।